Economic Development Should Not Have to Wait for Peace | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalEconomic Development Should Not Have to Wait for Peace
Located in the far north of the country, Kachin State is the place where the May Kha and Malikha rivers join to form the Irrawaddy River. Consisting of 18 townships, the state hasacold weather andalot of jade mines, which is why it is also known as Jade Land.
Kachin remains an economically underdeveloped state withalot of infrastructure needs. It contributes only 1.9 percent to the country’s GDP. Weak access to electricity and weak road infrastructure pose major challenges for investments.
An economic forum was held recently in Myitkyina, the state capital, in an effort to bring in investments into other sectors besides mining. At the forum, Myanmar Business Today sat down with U Hkyet Hting Nan, president of the Kachin Ethnic Entrepreneurs Association, to talk about the economic situation in the state where infrastructure needs remain great.
“There isaBurmese saying: “Your good will hasareturn”. Yet there’s no return for the natural resources of Kachin,” said U Hkyet Hting Nan. “We producealot of jade but there are no benefits for the state. Phakant Road, for instance, receives no support from the Union Government. Kachin State also produces gold, precious metals and forestry products, for which it should receive returns.”
In 2016, the government stopped renewing jade mining licenses across the country inamove to comply with the new Myanmar Gemstone Law. Bylaws for the legislation are expected soon and the issuing of jade mining licenses will resume thereafter. But the 2016 move by the government means that there will be no active jade mine licenses in 2020.
The suspension of license renewal was also aimed at sustaining states’ natural resources. However, U Hkyet Hing Nan pointed out that there should beaplan to help the state’s internal migrants, the majority of whom depend on mining activities.
“The present government inherited the bad consequences of nearly seven decades of mismanagement. So it will take time for the damaged environment to recover,” he said. “Approximately 700,000 people from across the country migrated to Phakant to work as jade scavengers while the native population is around 700,000 to 800,000. So there should be at leastashort-term plan to address the issue.”
The Kachin Ethnic Entrepreneurs Association has given its assurance that it will work with local and foreign companies as well as other organizations to ensure sustainable development in the state.
Given its abundant natural resources, Kachin State hasalot of investment opportunities to offer, said U Hkyet Hting Nan. In addition to jade mining, there are gold and other mining activities in the state. Tourism represents another area of under-tapped potential, as the state is home to scenic ice-capped mountains, lush forests and streams as well as Indawgyi Lake, the country’s second-largest wildlife sanctuary with an area of over 100 square miles.
U Hkyet Hting Nan rejected the idea that development in Kachin State should only start once peace has been established in the region. Development efforts should be implemented in areas with stability and peace without waiting for national peace to be established, he suggested.
“Development after peace is not acceptable. [If that logic were true,] Chin State would beadeveloped area as it has no armed conflict. Now, it has beenamonth since we founded the Kachin Ethnic Entrepreneurs Association, for which the government has pledged to provide support.”
The association, he said, will work with the Union Government to ensure economic development in the state.
ေကျာက်စိမ်းမြေ လို့ခေါ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဖက်အကျဆုံး နေရာမှာ တည်ရှိပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ အစ မေခ ၊ မလိခ မြစ်နှစ်ခုပေါင်းဆုံတဲ့နေရာ၊ တောတောင်ထူထပ်သလို အေးချမ်းတဲ့ရာသီဥတုရှိတဲ့ ပြည်နယ်ဟာ မြို့နယ် ၁၈ ခု ရှိသလို အဖိုးတန်ကျောက်စိမ်းထွက်ရှိရာ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့အချိန်အထိ ကချင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ စီးပွားရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးမှှု နည်းပါးနေပြီး အခြေခံအဆောက်အုံ ကဏ္ဍလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေတဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည် GDP ၏ ၁ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတဲ့ ဒီပြည်နယ်ဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုဝင်ရောက်ပေမယ့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး အခက်အခဲရှိ နေခြင်းက စိန်ခေါ်မှှုအဖြစ်ရှိနေပါတယ်။
မကြာမီကလည်း ကချင်ပြည်နယ်စီးပွားရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ပြီး သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုအပြင် အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုလုပ်ငန်းတွေ ဝင်ရောက်ဖို့အတွက် ခြေလှမ်းပြင်ဆင်တဲ့ သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျင်းပခဲ့တဲ့ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာ ကချင် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဌ ဦးခက်ထိန်နန်နဲ့ Myanmar Business Today က တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းတွေ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးမှှုနည်းပါးပြီး အခြေခံအဆောက်အုံကဏ္ဍ လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေတဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
“ တစ်ယောက်နဲ့တစ် ယောက် စေတနာထားရင် မေတ္တာထားရင် အဲဒါက အသွားအပြန်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကချင်ပြည်နယ်က သယံဇာတ ပစ္စည်းတွေကတော့ အသွားအပြန် မရှိသေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကျောက်စိမ်းဆိုရင် ဒီက အများကြီးထွက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကထွက်ရှိပြီးတော့ အကျိုးအမြတ်တွေက ဘာမှမရှိဘူး ဥပမာဆိုရင် ဖားကန့်ကလမ်းဆိုရင် အစိုးရက ဘာမှ ပံ့ပိုးထားတာမရှိသေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ရွှေတွေ သတ္တုတွေ သစ်တောတွေ အများကြီးထွက်တယ်။ ဒါပေမယ့် စေတနာထားရင် မေတ္တာထားရင် အဲဒါက အသွားအပြန်ရှိသလို ဒီပြည်နယ်ကထွက်ရှိတဲ့ သယံဇာတပစ္စည်းတွေ အကျိုးအမြတ် တွေလည်း အသွားအပြန်တော့ရှိသင့်တယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်အပါအဝင် နိုင်ငံတဝန်းရှိ ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက်တူးဖော်သည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကစတင်ပြီး သက်တမ်းတိုးခွင့်မပြုတော့သလို ၊ အဲဒီလို နှစ်အလိုက် သက်တမ်း ကုန်လုပ်ကွက်တွေ အားလုံး စာရင်းပိတ်အခြေအနေကတော့ ၂၀၂၀ မှာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေကို သုညအခြေအနေ(Zero Setting) လို့ ပြောပါတယ်။ အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေက ပြင်ဆင်ထွက်လာပြီးတော့ နည်းဥပဒေထွက်လာပြီးနောက်မှာတော့ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ပြန်လည်ချထားပေးတော့မယ့်သဘောလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုရပ်ဆိုင်းမှှု ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ သဘာဝသယံဇာတွေကို ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲစေဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်မှှု တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရေတိုအနေနဲ့လည်း အဲဒီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က အခြေချလာရောက်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ သူတွေကိုလည်း နည်းလမ်းတစ်မျိုးမျိုးပြန်ပြီး စဉ်းစားဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်လို့ ဦးခက်ထိန်နန်က ရှင်းပြပါတယ်။
“ အခုအစိုးရအနေနဲ့က အရင် နှစ်ပေါင်း ၇၀ လောက်က ဆိုးမွေတွေကို လက်ခံလာခဲ့ ရတာဖြစ်တဲ့ အတွက် အခုလို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှှုတွကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာ အချိန်တော့ နည်းနည်းတော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီမှာ ရှိတဲ့ ဖားကန့်ဒေသမှာဆိုရင် ရေမဆေး ကျောက်ရှာဖွေတဲ့ သူတွေကို ကတစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ရောက်ရှိပြီးလုပ်ကိုင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာက လူပေါင်း ၇ သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။ ပြည်နယ်က ဒေသခံလူဦးရေကတော့ ၇ သောင်း ၈ သောင်းလောက်ပဲရှိတာ ဒါဆို အဲဒီလူဦးရေတွေက ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲကို ရေတိုအနေနဲ့ ဖြေရှင်းပေးရမယ့် သဘောရှိနေတယ်” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ကချင်တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအနေနဲ့ကတော့ ကချင်ပြည်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီတွေ တစ်ခြားတိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး စဉ်ဆက်မပျက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်း ရှိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် အနေနနဲ့ ကျောက်စိမ်းတွေအပြင် ရွှေတူးဖော်မှှုတွေ ၊ တခြားသတ္တုတူးဖော်မှှုတွေ လည်းရှိနေသေးပြီး သဘာဝအရင်းမြစ်များဖြစ်တဲ့ တောတောင်ရေမြေတွေ ၊ စိမ့်စမ်းရေ တွေကလည်း ပြည်နယ်အတွင်း အများအပြားရှိပြီး သဘာဝအခြေခံခရီးသွားကဏ္ဍရှိသလို ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုတွေကို ဖိတ်ခေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်က အရှေ့တောင်အာရှမှာ ထူးခြားတဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သလို အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ ဘယ်ဒေသမှာမှ မရှိတဲ့ ရေခဲတောင်တန်းတွေလည်း ရှိနေသလို အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဒုတိယ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အလျား ၁၆ မိုင် အနံ ၈ မိုင်ကျယ်ဝန်းတဲ့ ဇီဝမျိုးကွဲပေါင်းစုံ နေထိုင်ကျက်စားနေတဲ့ အင်းတော်ကြီးအိုင်လည်း ရှိနေပါတယ်။ ယခုလို ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ သဘာဝသယံဇာတပေါကြွယ်ဝမှှုတွေကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှု အခွင့်အလမ်းများ ရှိနေစေတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိမှ ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ မူကိုတော့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ မငြိမ်းချမ်းတဲ့ နေရာတွေကို ခဏတာ ချန်ထားပြီး ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ နေရာတွေကိုတော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်လို့ရမယ်ဆိုရင် ချင်းပြည်နယ်က ဖွံ့ဖြိုးသင့်တာကြာပြီ ။ ဒီမူကိုတော့ လက်မခံဘူး ။ အခုဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ် ကချင်တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကိုလည်း ဖွဲ့စည်းလိုက်တာ အခုဆိုရင် တစ်လလောက်ရှိနေပြီ ။ ဒီအသင်းကို အစိုးရကလည်း အားပေးတယ် ကူညီပံ့ပိုးမူတွေပေးသွားမယ်လို့လည်း ပြောထားတာရှိတယ်” လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း ကချင်တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အနေနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရ ပြည်ထောင်စုအစိုးရတို့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ပြည်နယ်အတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အခုထက်ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Previous articleInterview with Thai Ambassador to Myanmar